Jarmalka oo dib u eegis ku sameeynaya magangalyo doonka ammanka halis ku ah dalkaasi | Somaliska
Jarmalka oo dib u eegis ku sameeynaya magangalyo doonka ammanka halis ku ah dalkaasi
Dalka Jarmalka ayaa bilaabaya dib eegis uu ku sameeynayo magangalyo doonka dalkaasi soo galay sanadihii ugu dambeeyey ee codsiga magangalyo weeydiistay.
Wasiiradda arrimaha gudaha iyo cadaaladda Thomas de Maizière iyo Heiko Maas, ayaa isla gartay shalay oo talaado aheyd in dib u eegis lugu sameeyo dalabyada magangalyo ee qaxootiga dalkaasi ee qaarkood la sheegayo in amaanka wax u dhimeen lana abuuro aalado loogaga hortagayo halistooda.
Thomas de Maizière iyo xisbigiisa muxaafidka ah ayaa sheegay in la eeggayo codsiyada dadka aan heeysan dekomintiyada ee ay misna adagtahayna in la aqoonsado kuwaas oo lugla dhaqmayo sida ugu fudud ee dalka looga saari karo. Wargeyska lugu magacaabo Süddeutsche Zeitung ee dalkaasi ka soo baxa ayaa qoray toddobaadkii hore warar sheegaya in baarayaasha Jarmulku is af garan waayeen kal hore ninkii bishii diseember dabayaaqadeedii dadka ku xasuuqay suuq dadka si weyn ugu adeeganayeen xilli loo diyaar garoobayey dagaaldagga ciida masiixiga. Baarayaashan ayaa sanadkii hore qaarkood sheegeen in uu yahay nin ammaanka halis ku ah, halka qaar kalena sheegeen ineeysan muuqan halistiisa. Taas oo ugu dambeyntii ay dhacday in uu dad badan si arxan darro ah u xasuuqo.
Jarmalka iyo dalal kale oo Galbeedka ku yaala ayaa kooxaha xag jirka ahi waxaa ay bartilmaameedsadeen iyagoo qaraxyo iyo falal aragagxiso ka fuliyey. Bishii diseembar ee sanadkii ina dhaafay ayaa nin u dhashay wadanka Tuunisiya waxaa uu dad ku laayey goob suuq ah oo dadku iyagoo isku diyaarinaya ciida masiixiga ka adeegnayeen, ninkan oo u baxday dalka Talyaaniga ayaa ciidanka ammaanka dalkaasi dileen.
Malmö: weerarada lagu hayo dadka soo galootiga